နေလောင်ကွက်၊အမဲစက်နဲ့အသားအရေမညီညာတာတွေကို ထိထိရောက်ရောက်ကုသပေးနိုင်မယ့်…. | CosmeticMyanmar
Home » Article » နေလောင်ကွက်၊အမဲစက်နဲ့အသားအရေမညီညာတာတွေကို ထိထိရောက်ရောက်ကုသပေးနိုင်မယ့်….
အရေပြားရဲ့နေရာတစ်ခုကနေ Melamin ဓာတ်အလွန်အကျွံထုတ်ပေးတာကြောင့် 🧐 🧐 🧐 အသားအရေမညီညာတာတွေ ၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ နေလောင်ကွက်တွေ ၊ 🤨 🤨 အသက်အရွယ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ တင်းတိပ် ၊ မှဲ့ခြောက်တွေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ Hormone ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ အညိုအကွက်တွေဟာ 😟 😟 အသားအရေလှပမှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်သလို 🙅‍♀️ 🙅‍♀️ ပျိုမဒီတို့ရဲ့နဂိုရှိရင်းစွဲ အသားအရေရဲ့အလှတရားတွေကိုပါ ဖုံးအုပ်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ 🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️ ဒါတွေအားလုံးကိုထိထိရောက်ရောက် သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်ဖို့အတွက် Cosmetic Myanmar ကနေ Palmer’s ကထုတ်တဲ့ Fade Cream လေးအကြောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ 📢 📢
Fade Cream မှာအစွမ်းထက်ပြီးအသားအရေတောက်ပစေတဲ့ 🍒 🍒 Kojic Acid , Berry သီးအနှစ် , နွယ်ချိုအနှစ် , ဗီတာမင် C&E , Alpha Hydrohy တို့အချိုးညီညီပေါင်းစပ်ပါဝင်တာကြောင့် 🤔 🤔 မှဲ့ခြောက် ၊ တင်းတိပ် ၊ နေလောင်ကွက်များနဲ့ အသားအရောင်မညီညာမှုအားလုံးကို ထိရောက်စွာသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ 🤗 🤗 နေလောင်ကာခရင်မ်နဲ့ အသားအရေအစိုဓာတ်ဖြည့်ခရင်မ်တို့ ပေါင်းစပ်ထားတာကြောင့် အမဲစက်ပြန်မဖြစ်ပေါ်စေနိုင်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ 👐🏽👐🏽 Fade Cream လေးဟာ နေလောင်ကာခရင်ပမာဏနည်းတာကြောင့် အကောင်းဆုံးရလဒ်ကိုရရှိစေနိုင်ဖို့အတွက် SPF 15 ကျော်တဲ့ခရင်မ်တစ်မျိုးမျိုး ထည့်သုံးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ပိုပြီးထိရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ 👍 👍
Oily Skin Formula ဖြစ်တာကြောင့် လုံးဝစီးကပ်မှုမရှိစေဘဲ ❌ ❌ အရေပြားအတွင်းပိုင်းထိစိမ့်ဝင်သွားစေနိုင်တာကြောင့် အာရှအသားအရေနဲ့အလွန်သင့်တော်ပါတယ်။ 😻 😻 အသုံးပြုပုံကတော့– တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အသားအရေအမျိုးအစားချင်းမတူညီတာကြောင့် အများစုကနေ့စဉ် 1️⃣ နေ့ကို 2️⃣ ကြိမ်ပုံမှန်လိမ်းပေးမယ်ဆိုရင် 4️⃣ ပတ်မှ 6️⃣ ပတ်အတွင်း အသားအရေကြည်လင်လာမှာဖြစ်ပြီး 6️⃣ ပတ်ကနေ 8️⃣ ပတ်အကြာမှာတော့ အမဲစက်နဲ့တင်းတိပ်တွေ သိသိသာသာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ မျက်နှာမှာသာမကဘဲ လက်နဲ့နေလောင်ဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ နေလောင်ကွက်နဲ့အသားအရေမညီညာတဲ့ နေရာတွေမှာအသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။💜 💛 ❤️
Image Source : www.facebook.com/palmer’s